Nikela ngeNkunkuma yeWaylon, iNkunkuma yokuFakelwa kweNaylon, iNkunkuma yePlatinic yeNylon evela kuMvelisi waseChina
Inkcazo:Nylon Washer,I-Nylon Beer Washer,I-Washer ye-Nylon yokuSasaza,I-Waslon yePlastic yeNylon,,
Home > Imveliso > Izinto zokuhlamba ezihlaziyiweyo > Nylon Washer
Iintlobo zeMveliso ze- Nylon Washer , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Nylon Washer , I-Nylon Beer Washer ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-Washers echaziweyo yeNqanaba leMigangatho
I-White White Plast ye-Nylon Washer eyenzelwe ngokwayo
I-White White Plast ye-Nylon Washer eyenziwe yenziweyo
I-Nylon Flat Washers kwimigangatho kunye neeSpecies Special
Umgangatho ogqityiweyo oMgangatho oPhezulu wePlatifle Nylon Washer
Amandla oMatshini agqibeleleyo uNylon Flat Gasket Washer
M3 Nylon Round Washers Washers
I-M2 M3 M4 DIN34815 i-washer emnyama yanylon
I-Washers echaziweyo yeNqanaba leMigangatho Zibekwe phantsi kwentloko yebhelthi okanye ngaphezulu kwe-nati ukusabalalisa amandla e-clamping kunye nokuthintela izikhombisi eziqinileyo ngokukhawuleza ekudoneni kwezixhobo. I-Nylon yinto elula,...
I-White White Plast ye-Nylon Washer eyenzelwe ngokwayo Kutheni Nylon? I-solid tensile solidht kunye nokufakelwa okugqibeleleyo, ii-washer zetafile zikwabizwa ngokuba zi washers ezicacileyo, ziyinto enye yokuqinisa kunye nokudibanisa...
I-White White Plast ye-Nylon Washer eyenziwe yenziweyo Kutheni Nylon? I-solidhtens tensile ephezulu kunye nokufakelwa okufezekileyo, ii-washer zetafile zikwabizwa ngokuba zi washers ezicacileyo, ziyinto enye yokuqinisa kunye neebhulukhwe...
I-Nylon Flat Washers kwimigangatho kunye neeSpecies Special Kutheni Nylon? I-solidhtens tensile ephezulu kunye nokufakelwa okufezekileyo, ii-washer zetafile zikwabizwa ngokuba zi washers ezicacileyo, ziyinto enye yokuqinisa kunye neebhulukhwe...
Umgangatho owenziwe kakuhle nguMgangatho ocacileyo weNylon Hexagon Nut I-nylon yeglasi yokuhlambela yindawo enendawo enomngxunya. I-washers ze-Nylon zinethayile ezilungileyo kunye neepropathi ezichasene nefrijini ezinepropathi ebandayo yokubandayo....
Amandla oMatshini agqibeleleyo uNylon Flat Gasket Washer Kutheni Nylon? I-solidhtens tensile ephezulu kunye nokufakelwa okufezekileyo, ii-washer zetafile zikwabizwa ngokuba zi washers ezicacileyo, ziyinto enye yokuqinisa kunye neebhulukhwe...
Nylon Round Washers Kutheni Nylon? Ezi zixhobo zingasasebenzi gumbi lolukhetho oluhle kakhulu zokusetyenziswa kumzi-mveliso weekhemikhali, ukucoca ioyile, ukuhambisa ukutya, kunye nezicelo zasemanzini. I-nylon yeglasi yokuhlambela yindawo enendawo...
I-M2 M3 M4 DIN34815 i-washer emnyama yanylon Ingcaciso yeMveliso. I-Nylon washer eneepropathi zokugquma ezilungileyo, ezingezozibuthe, ukufakwa kobushushu, ubunzima bokukhanya, Izixhobo ezizodwa, iirhasi zeplastiki nazo zinobushushu obuphezulu,...
KwiChina Nylon Washer Abaxhasi
Ngaphandle kwe-6061-T6 i-washer yeewallum kunye nee-washers ezingama-7075-T6 i-washers, i-nylon washer nazo zithandwa kakhulu kwimarike. Ii-washers ze-Nylon zisetyenziswa kuluhlu olubanzi lwezicelo ngenxa yobubanzi bepropathi eboniswe yimichiza yeplastiki. Iiplastiki zizinto ezisezantsi, zibiza izinto ezahlukeneyo kwaye zisetyenziselwa izinto ezahlukeneyo, kwaye zezona zinto ziqhelekileyo. Esona silo siyintloko se-ashers yinylon. Ukuba ufuna inkonzo yokupakisha okhethekileyo nge-washers ze-nylon kubandakanya iibhokisi ezikhethekileyo zephakheji, kukulungele nathi. Nawuphi na umbuzo okanye imfuno, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Nylon Washer I-Nylon Beer Washer I-Washer ye-Nylon yokuSasaza I-Waslon yePlastic yeNylon I-Nylon Washers